Kabaha Amniga ee Caadiga ah | Biyaha iska caabiya MB7 by AIRTOX
AIRTOX Kabaha badbaadada MB7
MB7 waa "Super Charged", Culays fudud oo dhan, iyo nabadgelyo aad u sarreysa kabaha.
Qaabkan ayaa bixiya AirtoxIlaaliyaha ciddiyaha sumadda: WHITELAYER®. Qalabkan ayaa asal ahaan lagu soo saaray Mareykanka iyadoo mashruuc gaar ah u ah askarta caanka ah ee Mareykanka, Navy Seals, kuwaasoo u baahnaa jaakadaha dabka lagu ridi karo gaar ahaan kuwa fudud oo dabacsan.
WHITELAYER® waa mid aad u jilicsan isla markaana isla markaana ka adag birta. Isku dhafan WHITELAYER® ciddiyaha ilaalin ee MB7 culeyskiisu waa 32 grams waana sidaas oo ay 55% ka khafiifsan tahay qalabka kale ee waardiyaha dharka Sida gunno dheeraad ah, walaxda ayaa ah mid aad u dabacsan, neefsanaya iyo xakamaynta qoyaanka.
The MB7 waa gabal yar oo farshaxan ah oo dareensan oo umuuqda mid qiimo leh. Kabaha ayaa bixiya heer sare oo raaxo ah. Qaabka ayaa ah mid u adkeysta oo kuleylka u adkaysta ilaa 300 ° C. Maqaarka kore waxaa lagu xardhay tayada ugu sareysa AAA + maqaar nubuck. Shaqo culus.
Waxaa lagu heli karaa hal nooc midab: madow (eeg qaybta nooca kabaha jeega yar MB5).
Qaabkan ayaa bixiya AirtoxIlaaliyaha ciddiyaha sumadda: WHITELAYER®. Maaddadan waxaa markii hore lagu soo saaray Maraykanka iyada oo ah mashruuc u ...